नेपाल आज | चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको हो ?
चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको हो ?
चीनले नेपालको २८ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ । नेपालका विभिन्‍न चार जिल्ला हुम्ला, रसुवा, संखुवासभा र सिन्धुपाल्चोकमा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ । सन् १९६२ मा चीनले नेपालको गोर्खा जिल्लाको सिंगो गाउँ नै आफ्नो बनाएकव र पछि त्यसलाई सरकारले सम्झौतामार्फत समाधान गरिएको बताइएको छ । नेपाली सीमामा सीमा पिलरहरु सारेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको स्रोतले बताएको भारतीय सञ्‍चारमाध्यमले लेखेका छन् ।
गोरखाको रुइ गाउँ नै चीनले कब्जा गरेको भनेर विभिन्‍न सञ्‍चारमाध्यमहरुले समाचार लेखेका थिए । उक्त समाचारमा सीमास्तम्भरु सारेर गाउँ नै कब्जा गरिएको बताइएको थियो । गोरखाका एक स्थानीय पत्रकारलाई सन्डे गार्जियनसँगको कुराकानीमा नेपालको रुइ गाउँमा चीनले सन् १९६२ मा कब्जा गरेको बताएका छन् ।
विभिन्‍न सञ्‍चारमाध्यममा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्‍ने समाचारहरु प्रकाशन भएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सरकारलाई चीनले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव गरेका थिए ।
कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनले नेपालको कुनै पनि भूभाग अतिक्रमण नगरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल-चीनबीच कुनै सीमा समस्या नभएको र आगामी दिनमा कुनै समस्या सिर्जना भएमा संवादमार्फत समाधान गरिने बताइएको थियो ।